Eeg filimka ugu horeeya dunida ee ku saabsan Ciise | Apg29
Waxaa keliya oo filimka in si buuxda u diiwaan geliyey goobaha kitaabiga ah!
From oo qabaal ku iskutallaabta, waa film ugu horeysay oo ku saabsan Ciise iyo kaliya hal si buuxda u diiwaan geliyey goobaha Kitaabka Qudduuska ah.
Mararka qaarkood waxaad ka heli kartaa helitaanka dahab dhab ah on Youtube. film Tani aamusan ka 1912 waa film ugu horeysay oo ku saabsan Ciise! Waxaa loo yaqaan "From qabaal si Cross ah" ( "From qabaal iskutallaabta").
Waa filim American ka 1912 oo waxaa lagu duubay meesha Masar iyo casriga ah Palestine.
Filimku wuxuu ugu horeysay oo ku saabsan Ciise
From oo qabaal ku iskutallaabta, waa film ugu horeysay oo ku saabsan Ciise iyo kaliya hal si buuxda u diiwaan geliyey goobaha Kitaabka Qudduuska ah. Waxa ay ahayd in uu waqti guul ganacsi, kuwaas oo diiwaan 30 jeer kharashka wax soo saarka.
Filimku wuxuu sheegayaa sheeko nolosha Ciise. Agaasimaha Sidney Olcott sidoo kale xiddig ee filimka. Actress iyo qoraa Gene Gauntier qoray script iyo taswiiran Maryan oo bikrad ah.
Poster waayo filimka American From qabaal si Cross ee (1912).
dhacdooyinka kitaabiga ah Qaar ka mid ah shaaca in filimka. Tusaale ahaan, Yooxanaa Baabtiisaha isagoo farta ku fiiqaya in Ciise yahay Masiixa, laakiin waxaan laga yaabaa in aan arko baabtiiska. Tan iyo markii horyaalka ee filimka waa wax suugaan marka ay timaado dhamaadka. Cross ka mid ah, laakiin, Ma jiraan sarakicidda.
Tani waa mid aad u xun, maxaa yeelay, Ma jiraan sarakicidda, ka dibna waxaa sidoo kale waa badbaado lahayn. Laakiin Ciise Masiix si dhab ah ka maanta dhintay iyo nolosha sara kacay iyo marka aad hesho isaga waa la badbaadin doonaa.
Ciise iskutallaabta dusheeda.
Waxaa lagu turjumay 26 luqadood
Sidney Olcott ahaa kii ugu horeeyay ahaantii fahmi xoog filimka oo lagu sameeyo wax soo saarka dhab ah oo ku saabsan nolosha Ciise ee ka dhacay casriga ah Palestine. Filimku wuxuu ahaa guul weyn oo heshay reviews aad u wanaagsan. Waxaa lagu turjumay 26 luqadood oo ahaa markaas illoobay in mabda'a saaro.
Intii lagu guda jiray filim noqday film dhibanaha shaqaale ah oo isku day dhac ah. Agaasimaha Sidney Olcott lahaa mid ma aha faa'iido ah, taas oo ahayd 30 jeer kharashka wax soo saarka.
Ka dib markii Vitagraph Studios iibsaday Kalem Studios, sidaas waxaa dib u sii daayo film ee 1919. Filimkan ayaa waxaa markii dambe la sii daayay iyada oo music daray iyo sheeko.
goobta meeshii Ciise socodka biyaha on sameeyey gaadhista double.
hamiday ugu horeeya ee - filimka ugu horeeya dunida ee ku saabsan Ciise
From tababaraha inuu iskutallaabta
From qabaal si Cross ee (1912) A Silent Movie Review